Fampiasana sy valiny amin'ny Media sosialy tsy mitady tombony
Tombontsoa sy valiny amin'ny tambajotra sosialy
Alatsinainy Aprily 9, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Niara-niasa tamin'ny fikambanana tsy miankina maromaro izahay nandritra ny taona maro ary toa nisy karazany roa ny teti-bola tsy miankina… aotra na taonina. Amin'ireto roa ireto dia gaga aho fa vitsy ny nampiditra tambajotra sosialy sy media sosialy tao anaty fifangaroan'izy ireo. Ny mpitarika tsy mitady tombontsoa dia tompon'ny tambajotra, saingy toa tsy nahita ny fomba hampitomboana izany tambajotra an-tserasera izany.
Ny fikarohana avy amin'ny tatitra momba ny zanabola tsy ara-tsosialy 2012 nonprofit dia mampiseho fa ny fikambanana tsy miankina mitombo dia mampitombo hatrany ny fisian'izy ireo amin'ny tambajotra sosialy nefa tsy mandany fotoana na vola be. Ny fidirana lalina amin'ny fomba ahatongavan'ireo tsy mitady tombony ireo valiny ireo dia nahita fahitana sarobidy.
Raha misy isa tokony hiantsoantso avy eny ambony tampon-trano dia asehon'ireo angon-drakitra fa mety mitentina 3.50 $ ny salanisan'ny Facebook Like nefa ny vola azo vokarina dia $ 214.81. Tsara ny tambiny amin'ny fampiasam-bola. Ny lakilen'ity stat tsy mampino ity dia ny tsy fitadiavam-bola miova fiainana ary mazàna manana tantara tsy mampino zaraina… ny fidirana amin'ny loharanon-karena ara-tsosialy dia hamerina ilay tantara ary hizara izany amin'ny vondron'olona hafa izay hamaly.
Tags: tatitra momba ny benchmarktsy mitady tombontsoafikambanana tsy mitady tombontsoamari-pahaizana tsy miankinahaino aman-jery sosialy
Douglas Karr Monday, April 9, 2012 Sunday, October 4, 2015
GrexIt: Repository fahalalana ho an'ny mailaka Google Apps
Antontan'isa amin'ny mailaka finday